Page 1 of 3691234567...»Last »
Myanmar singer Ye Lay in USA
Myanmar actor and singer Ye Lay was in USA for live show
Funny Joke: Twenty Bucks
A man is walking home late at night when he sees a
Funny Joke: Almonds, anyone?
A tour bus takes off withafull loan of seniors. Soon after,
ဆယ်ကျော်သက် လေနုအေး by တန်ခူး ဒီမနက် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသူလေးကို ဆရာမက သူ့ ဖုန်းခိုးတယ်ဆို စွတ်စွဲလို့ကျောင်းသူလေး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို ဖတ်မိတော့ ရင်ထဲမှာ အတော့်ကို ဝမ်းနည်းကြေကွဲမိတယ်… ဖုန်းတလုံးနဲ့ ဘဝတခုလဲလိုက်ရတဲ့အဖြစ်… ဆရာမရဲ့လုပ်ရပ်တွေကလဲ ပြင်းထန်လွန်းလိုက်တာ… အထူးသဖြင့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေကို သင်တဲ့ဆရာမဟာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရဲ့ စိတ်အခြေအနေတွေကို လေ့လာထားသင့်တယ်… လက်လွတ်စပယ် ပြောဆို, စွတ်စွဲအရှက်ရစေတာဟာ အတော့်ကို လက်ခံလို့ မရတဲ့အဖြစ်… ကျွန်မက ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သားတယောက်ရဲ့မိခင်ဖြစ်နေတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို မိဘနေရာက ပူးဝင်ခံစားရင်း ကြေကွဲမိတယ်… သားသုတလေးကို ကျန်းမာရေး, ပညာရေး, လူမှုရေး, ဘာသာရေးစသဖြင့် လူ့ ဘဝထဲဝင်တဲ့အခါ အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်ဆို ဟိုးငယ်ငယ်လေးကတည်းက အသေးစိတ်လေးကအစ ကျွန်မနည်းကျွန်မဟန်နဲ့ပျိုးထောင်ခဲ့တယ်… အရွယ်အမျိုးမျိုးမှာ အခက်အခဲအမျိုးမျိုးရှိခဲ့ပေမယ့် […]
Posted in Articles, Knowledge Base, Myanmar/Burmese, Notes | No Comments »
ဒီနေ့ မနက် အိမ်က ကိစ္စတွေ လုပ်အပြီးမှာ gallery ကိုသွားတယ်။ ထမင်းဘူးလေးနဲ့။ မနက်ဖြန်ပွဲအတွက် မပြီးသေးသော ကိုယ့်ပန်းချီကားတွေကို ဘောင်တပ်တာ ချိတ်တာ စာစီစာရိုက်ပေးတာတွေသွားလုပ်တယ်။ ခုနောက်ပိုင်း အပြင်စာတွေကို စိတ်မချတာရော စားရတာ အဆင်မပြေတာရောကြောင့် ကိုယ့်ဘာသာ ထမင်းဘူးလေးတစ်ဘူး သွားလေးရာကိုင်သွားတယ်။ အိတ်ထဲမှာလည်း ရေဘူးတစ်ဘူးထည့်ထားတယ်။ ငယ်ငယ်ကလို ထမင်းဘူးကိုင်ရမှာပျင်းတာ ရှိုးပဲ့မှာစိုးတာတွေ မသိတော့ဘူး။ အရေးကြီးတာက စုံတကာစေ့နေတဲ့ ရောဂါထဲ အစာအိမ်ပါ ပြန်ပြန်မထလာဖို့မဟုတ်လား။ ဒီတော့ ထမင်းဘူးလေးနဲ့ပေါ့။ တနေကုန် တကုတ်ကုတ်လုပ်ပြီး ညနေကျ အကုန်ဆာလာကြတာမို့ မြန်မာပလာဇာကိုပြေးပြီး မုန့်စားကြတယ်။အပြန်ကျ ညပဝလည်းလာမှာ ကိုယ်တွေလည်း အလုပ်မပြီးကြသေးတော့ ကြက်ကင်တစ်ကောင်၊ နဲ့ ဝက်သား ကောက်ညင်းထုတ် ၃ထုတ်ဝယ်လာတယ်။ market place က ။ ကိုယ် မြန်မာပြည်မှာ […]
Posted in Food, Knowledge Base, Myanmar/Burmese | No Comments »
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၃ ရက် NCA လက်မှတ် ရေးထိုးပွဲမှ-ကောက်နှုတ်ချက် ပျော့ပျောင်းခြင်းဟာ ပျော့ညံ့ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး ညှိနှိူင်းတာဟာ အရှုံးပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းရမှာကို စိုးရွံ့မနေကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အလယ်တင့်တယ် အားကောင်းတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုကြီး ပေါ်ထွန်းရေးအတွက် နောင်လာမယ့် မျိုးဆက်တွေ တောက်ပရေးအတွက် ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာ စေတနာ ၊ပညာ၊သတ္တိ လိုအပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံ အပေါ်ထားအပ်တဲ့စေတနာ၊ စေတနာရဲ့အသီးအပွင့်တွေ ဝေဆာနိုင်မဲ့ ပညာ၊ ပညာရဲ့လမ်းညွှန်မှုအရ လုပ်ရဲတဲ့ သတ္တိတွေနဲ့ ရှေ့ငြိမ်းချမ်းရေး နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို တာဝန်ကျေစွာ ဆောင်ရွက်သွားကြပါစို့လို့ တိုက်တွန်းမေတ္တာရပ်ခံခြင်ပါတယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် Credit to Yan Aung